Mabasa Evaapostora 21:1-40
Munzira achienda kuJerusarema (1-14)
Kusvika muJerusarema (15-19)
Pauro anoteerera zano revakuru (20-26)
Mhirizhonga mutemberi; Pauro anosungwa (27-36)
Pauro anobvumirwa kutaura nemhomho yevanhu (37-40)
21 Patakazokwanisa kuparadzana navo, takapinda mungarava, tikananga kuKosi, tikazoenda kuRodzi mangwana acho, ndokubva ikoko tikasvika kuPatara. 2 Patakawana ngarava yaienda kuFenikiya, takakwira tikaenda. 3 Patakanga tava kuona chitsuwa cheSaipurasi, takachinyenyeredza tikachipfuura tichichisiya chiri kuruboshwe takananga kuSiriya, tikamira pamahombekombe eTire, paida kuburutsirwa zvinhu zvaiva mungarava. 4 Takatsvaga vadzidzi tikavawana uye takagara muTire kwemazuva manomwe. Asi vakaramba vachiudza Pauro zvavaiudzwa nemweya kuti arege kumbotsika muJerusarema.+ 5 Saka nguva yedu yekuti tibve ipapo payakakwana, takaenderera mberi nerwendo rwedu, asi vese, kusanganisira vakadzi nevana, vakatiperekedza kusvikira tabuda muguta racho. Uye takapfugama pamahombekombe, tikanyengetera, 6 tikaonekana navo. Takabva takwira mungarava, ivo vakadzokera kudzimba dzavo. 7 Takaenderera mberi nerwendo rwedu rwekubva kuTire nengarava tikasvika kuToremai, ndokukwazisa hama, tikagara nadzo zuva rimwe chete. 8 Mangwana acho takasimuka tikasvika kuKesariya, ndokuenda kumba kwaFiripi, muevhangeri, akanga ari mumwe wevarume vaya vanomwe,+ tikagara naye. 9 Murume uyu aiva nevanasikana vana, vakanga vasina kuroorwa,* vaiprofita.+ 10 Asi patakanga tamboti garei ikoko kwemazuva, mumwe muprofita ainzi Agabhasi+ akauya achibva kuJudhiya. 11 Uye akauya kwatiri akatora bhandi raPauro, akazvisunga makumbo nemaoko, ndokuti: “Izvi ndizvo zvinotaurwa nemweya mutsvene, ‘Muridzi webhandi iri achasungwa seizvi nevaJudha kuJerusarema,+ uye vachamuisa mumaoko evanhu vemamwe marudzi.’”+ 12 Patakanzwa izvi, isu nevaya vakanga varipo takatanga kumuteterera kuti arege kukwidza kuJerusarema. 13 Pauro akabva apindura kuti: “Muri kudarireiko nhai, kuchema muchindipedza simba? Handina kungogadzirira kusungwa chete, asiwo kutofira zita raShe Jesu kuJerusarema.”+ 14 Paakaramba kunyengetedzwa kuti asaenda, takabva tanyarara tikati: “Kuda kwaJehovha* ngakuitike.” 15 Pashure pemazuva aya takagadzirira rwendo, ndokuzopinda munzira takananga kuJerusarema. 16 Vamwe vadzidzi vekuKesariya vakaendawo nesu vakatiperekedza kwaMinasoni wekuSaipurasi, mumwe wevadzidzi vekutanga ane kumba kwataizogara. 17 Patakasvika muJerusarema, hama dzakatitambira nemufaro. 18 Asi mangwana acho Pauro akaenda nesu kuna Jakobho,+ uye vakuru vese vaivapo. 19 Akavakwazisa, akatanga kurondedzera zvese zvakaitwa naMwari pakati pemamwe marudzi muushumiri hwake. 20 Pavakanzwa izvi vakatanga kukudza Mwari, asi vakati kwaari: “Hama yedu, uri kuona kuti pakati pevaJudha pane zviuru zvevatendi, uye vese vanoshingairira Mutemo.+ 21 Asi vakanzwa runyerekupe nezvako kuti wanga uchidzidzisa vaJudha vese vari pakati pemamwe marudzi kuti vatsauke kubva pana Mozisi, uchivaudza kuti varege kuchecheudza vana vavo kana kutevedzera tsika dzinofanira kuchengetwa.+ 22 Saka toita sei? Vachatozvinzwa chete kuti wasvika. 23 Saka wotoita zvatinokuudza: Tine varume vana vakaita mhiko. 24 Enda nevarume ava, uzvichenese pamwe navo maererano neMutemo, wovabhadharira zvinenge zvichidiwa, kuti misoro yavo iveurwe. Munhu wese achabva aziva kuti zvese zvavakaudzwa nezvako ndezvekunyepa, asi kuti uri kufamba zvakanaka uye kuti uri kuchengetawo Mutemo.+ 25 Kana vari vatendi vanobva pakati pemamwe marudzi, takatumira shoko tichivaudza zvatakasarudza, kuti vanofanira kusiyana nezvinhu zvakabayirwa zvidhori,+ ropa,+ zvinhu zvakadzipwa,*+ uye upombwe.”*+ 26 Mangwana acho Pauro akabva aenda nevarume vacho, akazvichenesa pamwe nevaaiva navo+ maererano neMutemo, uye akapinda mutemberi kuti anozivisa paizopera mazuva ekuzvichenesa kwacho, uye paifanira kuzobviswa mupiro wemumwe nemumwe. 27 Mazuva acho manomwe paakanga ava kupera, vaJudha vekuEzhiya vakamuona mutemberi vakakusvudzira mhomho yese, uye vakamubata, 28 vachishevedzera vachiti: “Vanhu vaIsraeri, tibatsireiwo! Uyu ndiye munhu anodzidzisa vanhu kwese kwese achishora vanhu vedu, Mutemo wedu nenzvimbo ino. Iye zvino atouyawo mutemberi nevaGiriki uye asvibisa nzvimbo ino tsvene.”+ 29 Nekuti vakanga vamboona Trofimo+ wekuEfeso ainaye muguta, saka vakafunga kuti Pauro akanga auya naye mutemberi. 30 Guta rese rakaita zhowezhowe, uye vanhu vakauya vachimhanya pamwe chete ndokubata Pauro, vakamuzvuzvurudzira kunze kwetemberi, uye masuo akabva avharwa pakarepo. 31 Pavakanga vava kuda kuedza kumuuraya, shoko rakasvika kumutungamiriri weboka revarwi kuti Jerusarema rese rakanga ranyongana; 32 akabva angotora varwi nevakuru veuto, ndokudzika vachimhanyira kwavaiva. Pavakaona mutungamiriri weuto nevarwi, vakarega kurova Pauro. 33 Mutungamiriri weuto akabva asvika pedyo, akamutora, akarayira kuti asungwe necheni mbiri;+ akabva abvunza kuti aiva ani uye kuti akanga aitei. 34 Asi vamwe vaiva mumhomho yevanhu vakanga vava kuti uyu achidaidzira chino uyo achidaidzira icho. Saka paakatadza kunzwa pane nyaya yacho pamusana pemheremhere, akati aunzwe kudzimba dzevarwi. 35 Asi paakasvika pamatanho, akatozoita zvekutakurwa nevarwi nemhaka yekupenga kwainge kwava kuita vanhu, 36 nekuti mhomho yevanhu yakaramba ichitevera, ichishevedzera kuti: “Muurayei!” 37 Paakanga ava kuda kupindwa naye mudzimba dzevarwi, Pauro akati kumutungamiriri weuto: “Ndinobvumirwawo kutaura nemi here?” Iye akati: “Unogona kutaura chiGiriki? 38 Saka hausi iwe here muIjipiti akambokonzera vanhu kuti vapandukire hurumende akaenda musango nevarume 4 000 vaiva nemapakatwa?” 39 Pauro akabva ati: “Ini ndinotova muJudha,+ wekuTaso+ kuKirikiya, chizvarwa cheguta rakakurumbira. Saka ndinokumbirawo kuti mundibvumire kutaura nevanhu.” 40 Paakamubvumira, Pauro akamira pamatanho, akanyararidza vanhu achishandisa ruoko rwake. Vanhu vese pavakati zii, akataura navo nechiHebheru,+ achiti:
^ ChiGir., “mhandara.”
^ Kana kuti “zvakaurayiwa zvisingabudiswi ropa.”